लेखराज भट्ट एमाले सचिवमा निर्वाचित, सचिवमा कसले कति पाए मत ? — onlinedabali.com
लेखराज भट्ट एमाले सचिवमा निर्वाचित, सचिवमा कसले कति पाए मत ?
काठमाडौँ । पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट नेकपा (एमाले) को सचिवमा निर्वाचित भएका छन् । सौराहमा भर्खर सकिएको मत गणनाअनुसार भट्टले १७०४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी भट्टसँगै पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि विजयी भएका छन् । दुबै नेता ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए तर एमाले नेता भीम आचार्य र टंक कार्कीले बागी उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव भएको थियो ।
एमाले नेता गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र रघुवीर महासेठ पनि निर्वाचित भएका छन् । सचिवमा सबैभन्दा धेरै मत विष्टले १९७६ मत पाएका छन् । त्यस्तै, योगेश भट्टराइले १९६४, टोपबहादुर रायमाझीले १७००, रघुवीर महासेठले १५१३ र छविलाल र पद्मा अर्यालले समान १८०० मत पाएका छन् ।
सचिवमा बागी उम्मेदवारी दिएका एमाले पुराना नेता आचार्य र कार्की भने पराजित भएका छन् ।
यसअघि उपाध्यक्षमा पूर्वमाओवादी नेता बादलसहित ओलीले प्रस्ताव गरेका पात्रले नै जितेका छन् । उपाध्यक्षमा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले निर्वाचित हुनेमध्येमा सबैभन्दा कम १७६८ मत पाएर जितेका छन् ।
निर्वाचन समितिले औपचारिक रुपमा मत परिणामम सार्वजनिक नगरेपनि सबैभन्दा धेरै मत अष्टलक्ष्मी शाक्यले पाएकी छन् । शाक्यले १९७६ मत पाएकी छन् । जबकी २०९६ मत खसेको थियो ।
त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डेले १९२५, सुवासचन्द्र नेम्वाङले १८६५, विष्णु पौडेलले १८५६, युवराज ज्ञवालीले १८४२ मत प्राप्त गरेका छन् । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका नेता घनश्याम भुसालले भने ७२५ मत ल्याएर पराजति भएका छन् । ओली पक्षले प्यानल नै बनाए बाँडेको अवस्थामा पनि भुसालले पाएको मतलाई सम्मानजनक मानिएको छ ।
उपाध्यक्षमा भुसालले उम्मेदवारी दिएकै कारण चुनाव भएको थियो । ओलीले पदाधिकारीमा नाम नपारेपछि भुसालले उम्मेदवारी दिएका थिए ।